google Earth / map - Geofumadas
Eji na curiosities na Google Earth na Google Maps
Etu esi ewulite ulo 3D na Google Earth
Ọtụtụ n'ime anyị maara ngwa ọrụ Google Earth, ọ bụ ya mere na afọ ndị na-adịbeghị anya anyị hụrụ nzụlite ya na-atọ ụtọ, iji nye anyị azịza ndị na-abawanye ụba na-aga n'ihu na mmepe teknụzụ. Ngwaọrụ a na - ejikarị chọta ebe, chọta isi ihe, wepụta nhazi, tinye data gbasara ohere iji mepụta ụdị ...
Chọta elu nke ụzọ na Google Earth
Mgbe anyị sere ụzọ na Google Earth, ọ ga-ekwe omume ime ka ịrị elu ya hụ na ngwa ahụ. Mana mgbe anyị na-ebudata faịlụ ahụ, ọ na-eweta njikwa na latitude na longitude naanị ya. Elu elu bụ mgbe efu. N'isiokwu a anyị ga-ahụ otu esi tinye ihe na faịlụ a na elu nke enwetara site na ụdị dijitalụ (srtm) nke Google Earth na-eji. See Nsoro ...
Chọta map ma dezie ụzọ iji BBBike
BBBike bụ ngwa nke ebum n’uche ha bụ ị nye onye nhazi ụzọ ọ ga-aga, jiri igwe, gafee otu obodo na gburugburu ya. Kedụ ka anyị ga - esi kee ụzọ ụzọ anyị? N'ezie, ọ bụrụ na anyị abanye na ebe nrụọrụ weebụ gị, ihe mbụ na-egosi bụ ndepụta na aha obodo dị iche iche, n'etiti ...
Ahụmahụ m na-eji Google Earth maka Cadastre
M na-ahụkarị ajụjụ ndị ahụ na isiokwu ndị ọrụ na-abịakwute Geofumadas site na nyocha ọchụchọ Google. Enwere m ike ịme cadastre site na iji Google Earth? Ruo ókè hà a imagesaa ka ihe oyiyi Google Earth dị? Kedu ihe kpatara nyocha m ji aga site na Google Earth? Tupu ha ata m ahụhụ ihe ...
Lelee nhazi Google Earth na Excel - ma gbanwee ha UTM
Enwere m data na Google Earth, achọrọ m iji anya nke uche nhazi na Excel. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ ala nwere ogidi asaa na ụlọ nwere akụkụ anọ. Chekwaa data Google Earth. Iji budata data a, pịa pịa "Ebe m", ma họrọ "Chekwa ebe dị ka ..." N'ihi na ọ bụ faịlụ ...
Download Google Earth maka ebe utm
Faịlụ a nwere mpaghara UTM na usoro kmz. Ozugbo ebudatara, ị ga-ewepụ ya. Budata faịlụ ebe a Download faịlụ a Ebe a dị ka ntụaka ... njikwa ala ga-esi na-ekewa ụwa niile na ngalaba dịka anyị ga-eme apụl, ọ bụ ndị meridian (ndị a na-akpọ longitude) na ...
Open shp faịlụ na Google Earth
Versiondị nke Google Earth Pro kwụsịrị ụgwọ ogologo oge gara aga, nke ọ ga-ekwe omume mepee GIS na Raster dị iche iche ozugbo na ngwa ahụ. Anyị ghọtara na e nwere ụzọ dị iche iche iji zipu faịlụ SHP na Google Earth, ma site na sọftụwia nwere ikike dịka BentleyMap ma ọ bụ AutoCAD Civil3D, ma ọ bụ ihe mepere emepe ...
Maapụ weebụ na-emegharị ihe osise akụkọ ihe mere eme
Ikekwe anyị atụtụbeghị anya ịhụ otu ụbọchị eserese akụkọ ihe mere eme, etinyere na Google, nke mere na anyị nwere ike ịmata ihe ala ebe anyị nọ taa dịka narị afọ atọ gara aga. Teknụzụ map webụ enyerela ya aka. Ma gawa! Kedu. Ihe omuma atu nke a bu uzo nostalgic nke London, ebe ha mere ...